Nagu saabsan - Jinan Knoppo Qalabaynta Qalabka Co., Ltd.
Jinan Knoppo Qalabaynta Qalabka Co., Ltd.
Ha "Waxsoosaarka Sirdoonka ee Shiinaha" ha ku guuleysto ammaanta adduunka!
Knoppo Laser waxaa la dhisay 2004, waa mid ka mid ah soosaarayaasha hogaaminaya aduunka ee xalalka tiknoolajiyada sare ee farsamada, oo loogu tala galay bixinta qalabka xalka qalabka caqliga leh iyo u suura gelinta macaamiisheenna laamaha kala duwan ee adduunka inay noqdaan kuwo waxtar badan oo tartan leh. Iyadoo in ka badan 15,000 nidaamyada goynta laser-ka ee suuqa iyo saldhig caalami ah oo si xawli ah u kordhaya, Knoppo Laser waxay ku jirtaa boos wanaagsan oo loogu adeegayo saldhigga macaamiisha caalamiga ah, iyadoo la dammaanad qaadayo waqtiyada ugu sarreeya iyo jawaabta ugu yar durba in ka badan 100 waddan. Diiradeena ayaa ah hal-abuurka, horumarka joogtada ah iyo horumarka degdega ah ee teknoolojiyada, kuwaas oo dhammaantood ujeedkoodu yahay in la kordhiyo waxtarka iyo dabacsanaanta, in la yareeyo kharashka iyadoo la soo saarayo heerarka ugu sarreeya ee saaxiibtinimada deegaanka iyo joogtaynta dhammaan faa'iidadeenna. Waxaan hiigsaneynaa inaan siino tikniyoolajiyad muhiim ah iyo xalalka is-dhexgalka ee loo habeeyay Warshadaha 4.0 iyo warshadaha caqliga badan, ka caawinta shirkadaha inay si fiican uga faa'iideystaan ​​fursadaha badan ee ka dhashay da'da dhijitaalka ah.
Kala duwanaanta wax soo saarku ma aha oo kaliya ka kooban mashiinnada goynta leyska gogosha ah ee naqshadaha iyo cabbirada kala duwan, laakiin sidoo kale mishiinnada goynta tuubbada laser-ka, Mashiinka xardho laser CO2, mashiinka sixitaanka laser, mashiinka alxanka laser, mashiinka goynta plasma, robot goynta biibiilaha plasma, H mashiinka goynta dogob, iyo riix biriiga iwm Codsiyada waxaa ka mid ah elektarooniga, qalabka guryaha, qurxinta, soo saarista birta, sameynta birta, calaamadaha xayeysiinta, qalabka dayactirka ee mashiinka iyo warshado kale oo badan.
Tiro ka mid ah wax soo saarka iyo teknoolojiyada ayaa helay shatiyadaha qaranka iyo xuquuqda nuqullada softiweerka, waxayna leeyihiin oggolaansho CE iyo FDA. Iyada oo kooxdeena R & D ee diirada saareysa, xirfad sare iyo khibrad leh iyo waax farsamo ka dib iib ahaan si dhameystiran u qalabaysan una tababaran, waxaan runti siineynaa khibrad adeeg macaamiisha ku jahaysan.
KNOPPO waxay leedahay in kabadan kun shaqaale, oo ay kujiraan in kabadan 100 cilmibaare lafdhabar, in kabadan 30 kormeerayaasha QA. Waxay leeyihiin waayo-aragnimo hodan ku ah warshadaha laser, had iyo jeer ku tijaabiyaan mashiinka nidaamka QA kahor dhalmada. Shirkadeenuna waxay lashaqeysaa Switzerland Raytools, Japan Fuji, Jarmalka IPG, Jarmalka PRECITEC, Japan SMC iyo Taiwan HIWIN iwm, had iyo jeer isticmaal qeybaha ugufiican mashiinkeena.
Dhamaan mashiinka waa 3 sano oo damaanad ah, oo leh nidaamka xakamaynta wireless-ka ee WIFI, hadii aad wax su'aalo ah ka qabtid mashiinkeena, injineerkeenu wuxuu kula xiriiri karaa mashiinkaaga Shiinaha isla markaana si dhakhso leh u xallin karaa dhibaatooyinkaaga.
Adeegyada 24ka saac ee internetka, 16 luuqadood ayaa taageera: Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Isbaanish, Carabi, Ruush, Beershiya, Indooniisiya, Boortaqiis, Jabbaan, Kuuriyaan, Thai, Turki, Talyaani, Fiyetnaam, iyo Shiine dhaqameed. Injineer sidoo kale waxaa laga heli karaa dibada.
Shayga ayaa loo maray iyada oo loo marayo shahaado qaran oo tayo leh isla markaana si wanaagsan loogu soo dhoweeyay warshadeenna ugu weyn. Kooxdayada khibrada leh ee injineernimada badanaa waxay diyaar u noqon doonaan inay kuugu adeegaan wadatashi iyo jawaab celin. Waxaan awoodnay inaan sidoo kale kugu soo qaadno shaybaarro lacag la'aan ah si aan ula kulanno waxyaabaha aad u baahan tahay. Dadaallada ugu habboon ayaa laga yaabaa in la soo saaro si ay kuu gaarsiiyaan adeegga iyo faa'iidooyinka ugu faa'iidada badan.
Qaar Ka Mid Ah Macaamiisheena
Shaqooyin cabsi leh oo kooxdeena ay ku darsadeen macaamiisheenna!